स्वास्थ्य – Complete Nepali News Portal
स्वास्थ्य	सन्तानका लागि विवाह आवश्यक छैन : पुरा पढ्नुहोस
June 22, 2017	स्वास्थ्य
– अश्विनी कोइराला माघ १२, २०७२- अनुपमा रोसी, साहित्यकार महिला–पुरुष सम्बन्ध, नेपाली समाजको प्रवृत्ति र यौनका विषयमा खुला रूपमा कलम चलाउने महिला निकै कम छन् । साहित्यकार अनुपमा रोसीले यी तीनवटै विषयमा निडर भएर कमल चलाएका कारण उनी कहिलेकाहीँ आलोचित पनि हुने गरेकी छन् । विद्यालयदेखि अखिलको राजनीति गरेकी अनुपमाले आफूभन्दा …
डा.सबिना श्रेष्ठ : सन्तान नहुनुको प्रमुख कारणहरु र समाधानको उपायहरु यस्ता छन्
June 20, 2017	स्वास्थ्य
विवाहपछि प्रत्येक दम्पतीको एउटा स्वाभाविक सपना हुन्छ– घरमा बच्चाको हाँसो गुञ्जियोस् । तर, चाहँदाचाहँदै पनि सबैको यो सपना पूरा हुन सकिरहेको हुँदैन । कुनै–कुनै महिलाले सन्तान जन्माउन सक्दैनन् । यस्ता दम्पतीमध्ये धेरैले आफ्नो जीवन एक्लो र फिका अनुभव गर्छन् । आज पनि हाम्रो समाजमा सन्तान नहुनुलाई भगवान्को श्राप वा पूर्वजन्मको …
June 18, 2017	स्वास्थ्य
एक अनुसन्धान अनुसार तिते करैलाको प्रयोगबाट पेटको क्यन्सर र मधुमेहको सघन उपचार हुन सक्ने पत्तो लागेको छ । हाम्रो गाउँठाउँ सबैतिर उत्पादन गर्न सकिने तिते करैलाको प्रयोग बाट पेटको क्यान्सर र मधुमेह निको हुन्छ भन्दा जोसुकैलाई अचम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्य साबित भएको छ । धेरैलाई थाहा नहुन …
अमलाका सात गुणकारी फाइदाहरु : पुरा जानकारी सहित
June 17, 2017	स्वास्थ्य
अमला प्रकृतिले निःशुल्क उपहार दिएको बहुगुणी फल हो । अमलामा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन सी पाईन्छ । अमला खानाले आँखाको रोशनी बढ्नुका साथै बच्चाको झाडापखाला समेत निको पार्छ । आर्युवेदिक दृष्टिकोणले पनि अमलाको अति नै महत्व छ । अमलामा रहेको तत्वले दिमाग तेज बनाउँछ । त्यसैगरी छालाको समस्याबाट दूर राख्छ । …
आभा शर्मा गर्भावस्थामा देखिने विभिन्न समस्यामध्ये एक हो तल्लो ढाड दुखाई । बच्चा हुर्काउनका लागि उपयुक्त बनाउँन शरीरमा प्राकृतिक रूपमा थुप्रै परिवर्तन आउँछन् । मेरुदन्ड, त्यसलाई सहारा दिने लिगामेन्ट्स्, पेल्भिस अनि वरिपरिका मांशपेशी, जसले पेल्भिसलाई आधार र लचकता दिएका हुन्छन्, ती सबैमा थुप्रै परिवर्तन आउँछन् । गर्भवती हुँदा यी सबै …
अपनाउनुस् यि टिप्सहरु गर्मीमा
June 15, 2017	स्वास्थ्य
गर्मीमा पसिना बढी आउँछ । त्यही भएर शरीरमा पानीको मात्रा कम नहोस् भन्नका लागि झोल पदार्थ प्रशस्त खानुपर्छ । पानी पर्याप्त खाइएन भने स्वास्थ्य खराब त हुन्छ नै, छाला पनि फुस्रो र फुंग उडेजस्तो हुन्छ । * पानीको ‘इन्टेक’ बढाउने अनेक तरिका छन् । पानी खाइरहन मन लाग्दैन भने जुस, …
१. विषयलाई जोड्नुहोस् तपाईं जुन चिज सिकिरहनुभएको छ, त्यसलाई पूरानो कुरासंग जोड्न सिक्नुहोस् । यसले तपाईंलाई दुवै कुराका बारेमा आवश्यक कुराहरु सम्झन सजिलो हुनेछ । २. दोहोर्‍याउनुहोस् यदि कुनै चिजलाई मनमनै दोहोर्‍याउनुहुन्छ भने त्यसलाई सम्झन सजिलो हुनेछ । अथवा, कुनै पनि कुरालाई कागजमा निरन्तर लेखेर पनि स्मरण गर्न सक्नुहुनेछ । …
आँखाको ज्योति बढाउन र १५ वर्ष तन्नेरी देखिने चामत्कारिक औषधी यस्तो छ !!
June 10, 2017	स्वास्थ्य
आँखाको ज्योति बढाउन र आसपासको छालालाई पुनर्जिवित गराउने उपचार जान्ने हो भने एकदम सरल छ साथै यसलाई बनाउने जडीबुटी पनि हाम्रै नजिक सजिलै पाइन्छन् । यो चामत्कारिक औषधी नजिकको दृष्टि दोष अथवा माइओपिआको उपचारको लागि एकदमै प्रभावकारी हुन्छ । यो औषधीको सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन …
June 6, 2017	स्वास्थ्य
भद्रपुर, २३ जेठ । बहुउपयोगी कागतीको व्यवसायिक खेतीले झापाका कृषक एवम् उपभोक्ता दुवैै लाभान्वित भएका छन् । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा यसको व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ । कागतीको नियमित सेवनले मानिसको स्वास्थ्यमा मद्दत पुग्छ । यसको महत्व र बजार बढ्दै गएका कारण कागतीको व्यावसायिक खेती बढ्दै गएको हो । आर्थिक …
”ब्रेनको कोष हराउन नदिन ३५ वर्षपछि नियमित सेक्स गर्न जरुरी” वैज्ञानिकहरुको भनाइ
May 31, 2017	स्वास्थ्य
तपाई हामीमध्ये धेरै जनालाई थाहा भएकै कुरा हो ढल्किदो उमेरसँगै दिमागका कोषहरु पनि निष्क्रिय हुँदै र हराउँदै जान्छन् । ३५ वर्ष पुगेपछि हरेक दिन हामीले ७ हजार दिमागका कोषहरु गुमाउन थाल्छौं । सायद यो सुन्दा पनि जो कोहीलाई उदेक लाग्न सक्छ । तर खुसीको खबर पनि छ । नियमित रुपमा …